12 पाठ चरम स्वामित्वबाट मार्केटिंगमा लागू Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 13, 2016 बुधबार, अप्रिल 13, 2016 Douglas Karr
उत्कृष्ट मार्केटिंग रणनीतिहरूको कार्यान्वयन धेरै भ्यारीएबलहरूको सन्तुलन हो। पर्याप्त योजना र दीर्घ-अवधि रणनीतिहरू बिना, फुर्ति मार्केटिंग प्रयासले ब्रान्डलाई ट्र्याल गर्न सक्दछ तर ढिलो र अत्यधिक आलोचनात्मक विपणन प्रयास एक stymie गर्न सक्छन्। बीचको कहीँ सफलता हो, संगठनको दीर्घकालिक लक्ष्यहरूमा निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक छ, तर स्रोतहरू छन् जुन वास्तविक समयमा दिशा र रणनीतिलाई बदल्न सक्दछ परिणामको रूपमा।
मैले भर्खर पढ्न सकें चरम स्वामित्व: कसरी यूएस नेवी मोहरहरू नेतृत्व र जीत। यो युद्धको मैदानमा पाठहरू र उनीहरू कसरी दैनिक व्यापारिक प्रयासहरूमा लागू गर्न सकिन्छ भन्नेको राम्रो पाठ हो। एक नौसेना अनुभवीको रूपमा, म यो पुस्तक को मेरो प्रशंसा मा धेरै पक्षपाती हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। तर एक व्यवसाय मालिक को रूप मा, म सिकेको पाठ संग अधिक सहमत हुन सकेन र कसरी उनीहरु मेरो व्यवसाय मा लागु।
मैले तिनीहरूलाई पढ्ने बित्तिकै एउटा पृष्ठका शब्दहरू कागजमा उफ्रिए। पुस्तकका लेखकहरूको सम्मानका साथ, म नेतृत्वको मुख्य तत्त्वहरूलाई पुनःप्रदर्शन गर्ने छु र तिनीहरूलाई संस्थाको समग्र मार्केटिंग रणनीतिमा लागू गर्न सक्छु।
लक्ष्यहरू - मार्केटिंगका मिशनहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्, कसरी यसले तपाईंको कम्पनी, तपाईंको व्यक्ति र तपाईंको प्रयासलाई प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्दछ। तपाइँको मार्केटिंग मिशनको पहिचान गर्नुहोस् र राज्य अभियान गर्नुहोस् र प्रत्येक अभियानको लागि अन्त राज्य।
संसाधन - बजेट, कर्मचारी, सम्पत्ति, उपकरण, परामर्शदाता, र प्रत्येक अभियानको लागि उपलब्ध समय पहिचान गर्नुहोस्।
योजना - कार्य प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण, प्रत्येक माध्यम विशेषज्ञहरु लाई सशक्त बनाउने वा कार्य को सम्भावित कोर्स विश्लेषण गर्न रणनीति।
चयन - उत्तम अभियानहरू निर्धारण गर्नुहोस्, छनोट गर्ने तिर झुकाई सरल अभियानहरू र फोकसिंग संसाधनहरूमा उनीहरूसँग सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने छ।
सशक्तिकरण - मार्केटिंग विज्ञहरु चयनित च्यानल र रणनीति तिनीहरुमा विशेषज्ञता र अनुभव छ को लागी योजना को विकास गर्न।
आकस्मिकताहरू - अभियानको प्रत्येक चरणको माध्यमबाट सम्भावित आकस्मिकताको लागि योजना। कसरी अभियान अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ अभियान कार्यान्वयन भएको छ? घटना मा गलत प्रक्रियामा के प्रक्रिया छ?
जोखिम - कम जोखिमहरू सकेसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यहाँ नियामक, सम्पादकीय, र अनुमोदन प्रक्रियाहरू छन् जुन अनुपालन सुनिश्चित गर्नका लागि लागू गर्न सकिन्छ?
डेलिगेट - तपाईका विशेषज्ञहरूलाई योजनाको अंशहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम गर्नुहोस् जब तपाईं पछाडि खडा हुन सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रियामा नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको काम टकरावबाट जोगिन सुनिश्चित गर्ने हो, र समग्र मिशन सफलता सुनिश्चित गर्न संसाधनहरू राखिएको छ।
मनिटर - निरन्तर जाँच गर्नुहोस् र उदाउँदो जानकारी विरूद्ध योजना योजना प्रश्न गर्नुहोस् यो प्रदर्शन गर्न जारी राख्नको लागि।
संक्षिप्त - सबै सहभागीलाई समर्थन र सम्पत्तिलाई समर्थन गर्ने, नेतृत्वको अभिप्रायलाई जोड दिदै योजनालाई सञ्चार गर्नुहोस्।
सोध्नु - प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र सबैसँग छलफल र अन्तर्क्रियामा संलग्न गर्नुहोस् उनीहरूले प्रत्येक अभियानको सबै पक्षहरू बुझेका छन् र कसरी तिनीहरू एक अर्कासँग कुरा गर्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न।
संक्षिप्त - सिकेका पाठहरू विश्लेषण गर्नुहोस् र उनीहरूलाई अभियानको कार्यान्वयन पछि भविष्य योजनामा ​​लागू गर्नुहोस्।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यसको आवश्यक पर्दैन कि मैले युद्धको मैदानमा सिकेका उही पाठहरूलाई मार्केटिंग अभियान भित्र ती लागू गर्न धेरै शब्दहरू परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। यस प्रक्रियाको हरेक चरणमा अभियानमा नेतृत्व र यस पछि डिफ्रिफिंग, स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने, उनीहरूलाई कुशलतापूर्वक तैनाथ गर्ने, र त्यसपछि सिकेको पाठहरू लागू गर्न अनुसरण गर्ने कुरामा केन्द्रित छ।
यहाँ एक अदृश्य हाइरार्की पनि छ जुन याद नहुनु हो। यदि तपाईंको मार्केटिंग डिपार्टमेन्ट र बजेट प्रबन्ध गर्ने तरिका यस्तै तरीकाले थियो भने, हरेक अभियान संगठनको लक्ष्यहरूसँग प .्क्तिबद्ध हुनेछ। हामी हाम्रो ग्राहकहरु द्वारा गर्न को लागी कति काम छ कि मा छक्क छन् कि छैन पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस् संगठनको वास्तविक मूल्यको साथ। यदि यसले तपाईंको तल्लो रेखालाई मद्दत गरिरहेको छैन भने - यो गर्न रोक्नुहोस्!
टैग: चरम स्वामित्वJocko willinkLeif Babinमार्केटिंग पुस्तकहरुनौसेना छापहरूपढ्नेपढ्छसील
Wipster: भिडियो समीक्षा र स्वीकृति प्लेटफार्म